LightCate - Famakiana ara-tsaina an-tserasera
Hevitra misimisy kokoa amin'ny Internet > Live Psychics > LightCate
Megan Desambra 26, 2017 Live Psychics520 Comments amin'ny LightCate
Psychic LightCate dia manana traikefa tamin'ny 20 nandritra ny taona maro izay nampiasa fahaiza-manao fahaizana mba hanampiana ny hafa ary hahita ny valin'ny fanontaniany manokana. Psychic LightCate dia nanampy ireo mpikambana 36 vao haingana miaraka amin'ny famakiana misimisy sy fanambarana am-bava Oranum. Ny fijoroana vavolombelona etsy ambany dia manambara izay nolazain'ny hafa momba ny fahamendrehana sy ny fahatsapan'i LightCate amin'ny maha-psychic an-tserasera azy.
Tena olona malala-tsaina aho. Azonao atao ny mitodika any amiko amin'ny karazana fanontaniana. Ny tena fahaizako dia eo amin'ny ara-panahy, ny fivavahana ary ny mistisista.
Desambra 26, 2017 amin'ny 6: 53 pm
Ramatoa tena tsara saina sy manam-pahalalana. " … Nosoratan'i dreamweaver1160
Hitako fa tsara sy haingana be i Mss LighCate ary hamaly avy amin'ny karatra fa marina izy ary nanontany azy aho fa be ny fanontaniana hanoro azy ary hampiasa azy indray misaotra "… nosoratan'i Calming
Ramatoa mahafinaritra izy, haingana sy marina. ”… Nosoratan'i Alex
Ny famakiana tsara sy ny Cate dia hampiseho aminao ireo karatra nosintoniny teny an-dalana. Nanana famakiana karatra Gipsy Hongroà aho - ny tiako indrindra. Mendrika ny fotoanao sy ny volanao izy. ” … Nosoratan'i establiz
vehivavy tsara tarehy tena haingana sy marina izy, fahafinaretana no hiverenako bebe kokoa !! ” … Nosoratan'i ladysmile
Ramatoa mahafinaritra sy sariaka be izy. Tiako ny famakiana miaraka aminy. Misaotra anao!" … Nosoratan'i juhana
Misaotra ary hiverina aho ary hampahafantatra anao xx ”… nosoratan'i sunny3107
Ramatoa malala, omeo anao ny vaovao ratsy mety ilainao ho re fa tsy te handre. ” … Nosoratan'i establiz
Mahafinaritra ny LightCate !! Manana izay tadiavinao izy. Marina ny fanomezany! Marina, mazava ary tena fanampiana. Raha te hahafantatra izay hatao ianao? … Ho anao izy ary ho hitanao tsara izay hatao… ”… nosoratan'i peaceofmind3
Saribakoly toy izany. Mahafatifaty ery. Tonga hatrany amin'ny kendrena. Famakiana tsara indrindra ho an'ny rehetra! Kintana 5. Ho afa-po tanteraka ianao! ” … Nosoratan'i reggs098765
Tsara sy manampy! Misaotra "… nosoratan'i helena73
Ny English-ny dia tsy ny tsara indrindra fa vehivavy mahatalanjona sy manambola tena mahay mamaky teny izy. Misaotra betsaka!" … Nosoratan'i MarcoPolo
Mpamaky tena marina. Tena nahagaga ny nanao fivoriana manokana niaraka taminy. ” … Nosoratan'i jugholu
Izy dia iray amin'ireo olona tsara indrindra azoko rehetra nahafaly ahy. Misaotra betsaka tamin'ny famakiana. ” … Nosoratan'i xhoi_89
Famakiana tena mahafinaritra… .. intuitive and friendly ”… nosoratan'i dstufra1
Misaotra betsaka… .Tsy nanam-potoana nilazana taminao aho fa tiako koa ianao :-) ”… nosoratan'i xhoi_89
Tena manan-talenta amin'ny karatra izy ary mitondra azy hamaky manokana, tsy hanenenanao izany! xxx ”… nosoratan'i Mandalalight
Cate dia mahatalanjona toy ny mahazatra. Tena mampitony sy mpanolo-tsaina. Tia azy!" … Nosoratan'i dstufra1
Mahagaga izy! Avy amin'ny vola. Andamp marina; Marina. Ilay olona tsara indrindra. Fihetsiketsehana an-dakilasy. Hiverina miaraka amin'ny fanavaozana aho! Tiako izy! Naoty 5 kintana! ” … Nosoratan'i swiftcats64
tena marina izy ary marina hatramin'ny nanolorako azy mafy noho ny hiverenan'i ui !!!! ” … Nosoratan'i vrinda113
Cate dia tsara! Ary marina tokoa ”… nosoratan'i marsylyttle
Mamaky tsara. Misaotra anao." … Nosoratan'i OverJoyed
Tena mahay mandanjalanja sy manam-pahalalana! Ramatoa Classy. Tsara izy! Tiako izy! Miverina foana aho! Hatra ny kintana 5! ” … Nosoratan'i swiftcats64
Tsara dia tsara izy, mahamenatra fotsiny izany fa nifarana rehefa nilaza zavatra tamiko izy satria lany ny trosa. ” … Nosoratan'i davina35
Tena tsara sy mafana ity vehivavy ity. Nanamafy izay efa hitan'ny olon-kafa izy. ” … Nosoratan'i Katja87
Tsara be izy! ” … Nosoratan'i 1111warlock
Cate dia soso-kevitra be ho an'ny rehetra. Mpanan-talenta lehibe izy, manampy anao hamantatra ny ho avy nefa manazava ny vokatry ny lasa koa izy. Misaotra betsaka 🙂 Hiverina aminao tokoa aho! ”… Nosoratan'i Witzuschka
Mahatalanjona izy, marina tsara, fanahy tena tsara fanahy… tiavo izy ”… nosoratan'i bonnielynn
Tena sariaka izy, tia manampy. Manan-talenta amin'izany. Nanampy ahy hahatsapa ho tsara kokoa amin'ny zavatra sasantsasany niahiahy ahy. ” … Nosoratan'i Summergirl65
Mahagaga… .. ”… nosoratan'i Scorps19
Sariaka, manampy, mahavariana! ” … Nosoratan'i Scorps19
TIA ANAO CATE… MATETIKA MAMARITRA AMIN'NY VAKANY… ARY MANAMPIASA AZA… Hiverina any ambadika any ... MAHATIA !! !! … Nosoratan'i Jennifer786
Tsara ”… nosoratan'i hushhu
Mahagaga izy! ” … Nosoratan'i ale510
Ramatoa mahafinaritra i Cate. Tena mahatakatra sy miahy ny fihetsem-ponao izy ary mora be ny tiany sy mankafy ny fiarahany noho io. ”… Nosoratan'i kjohn777
Famakiana mahavariana, Ramatoa tsara fanahy. Tena hahazo famakiana hafa avy aminy aho. Amporisihiko tanteraka izy amin'ny olon-drehetra! ” … Nosoratan'i silmarien
Mahafinaritra! " … Nosoratan'i jaykun
Wow !!! Tsara izy !! ” … Nosoratan'i jaykun
Tsara sy tsara fanahy izy. Nanome torohevitra tsara ho ahy izy ary hanandrana izany raha vantany vao afaka aho !! ” … Nosoratan'i jupitertunder
Tsy azoko lazaina akory ny zavatra niainako tamin'ny famakiny fa efa namaky be dia be aho eto fa mieritreritra aho fa nahita olona misaotra betsaka anao Cate hitady ny fanampianao aho ary manoro hevitra aho fa hanandrana azy indray mandeha izy dia mendrika ny tsirairay denaria laninao… ty Cate. ”… Nosoratan'i Anniekins
Zavatra tsara! ” … Nosoratan'i mfurney
Ny fanandramana tsara dia ho ao amin'ny tiako indrindra amin'ny famakiana manaraka, fitiavana raha misy olona miara-miasa amin'ny karatra! ” … Nosoratan'i gabbyhawk
Nandany fotoana fohy, fa namaky be dia be! ”… Nosoratan'i sycammer781
Famakiana tena marina tsara .. ”… nosoratan'i marcia21
Tena nanampy be izy. Izay rehetra nolazainy no tiako ho re. Mivavaka aho mba marina ny azy. Misaotra anao indrindra. Ity no lehibe indrindra tsapako tao anatin'ny volana maro. Fantany izay ataony! :) ”… nosoratan'i LaceyR08
Wow, famakiana mahafinaritra tokoa! Manoro hevitra mafy aho. ” … Nosoratan'i Lorann23
Manamarina an'i Cate momba ny toe-javatra misy ahy sy ny fivoaran'ny raharaha. Misy ny tsara sy ny ratsy manoloana ny toe-javatra misy ahy saingy afaka nanampy ahy izy ary antenaina fa handroso tsara ny raharaha. ” … Nosoratan'i crzdnem
Mahagaga! xx ”… nosoratan'i Latina666
Misaotra betsaka tamin'ny fanamafisana. ” … Nosoratan'i Witzuschka
TENA TSARA :) ”… nosoratan'i Annmay
Cate dia tsara tarehy sy tsara fanahy ary koa manam-pahaizana ary nandefa majika manokana hozahiko izay anio hosedraiko. Cate, hampahafantariko anao raha hiverina toa anao izay azonao antoka tokoa fa hiverina izy. ” … Nosoratan'i Latina666
Mamiratra toy ny taloha. ” … Nosoratan'i Scorps19
Tsara ny famakiana fa mandritra ny fotoana dia tokony ho ambany ny vidiny. ” … Nosoratan'i MayGirl
SOA ny mahagaga anao, tiako ny famakinao fa nahagaga. ” … Nosoratan'i corvettime02
Misaotra anao." … Nosoratan'i sweetally
Famakiana tsara .. tena marina! ” … Nosoratan'i vz
Famakiana tena mahaliana. Milamina sy manam-pahalalana. ” … Nosoratan'i _Alexis
Tiavo hitan'ny vehivavy ”… nosoratan'i mfurney
Mpamaky haingana sy haingana. ” … Nosoratan'i dd41783
Tonga haingana amin'ny resaka izy ary mamaly haingana dia haingana. ”… Nosoratan'i amber11134
Ramatoa mahafinaritra - tsy maintsy miandry ary hahita ny valiny, fa manampy sy be fiahiana. ” … Nosoratan'i alidenes
Ramatoa mahafinaritra mahafatifaty… mailaka ary tena miraharaha… torolalana ho an'ny rehetra :) ”… nosoratan'i teresabarlow82
Heveriko fa tena mahitsy izy ary mandroso. Tsy hilaza aminao izy hoe te handre. ”… Nosoratan'i geminigoddess
Haingam-pandeha izy, marina, marina, tsara, mahafatifaty ary tena manan-tsaina. Ramatoa mahafinaritra toy izany ary nanampy ahy tsara. Tsy maintsy manao famakiana manokana manokana miaraka aminy aho. Tena tiako izy fa tsara fanahy be izy. mendrika izany ary mendrika ny fotoana! 🙂 misaotra LightCate, Ramatoa tsara tarehy! ”… Nosoratan'i G19886
Mahagaga i Cate… Tena mieritreritra sy be fiahiana. Misaotra, Cate xx ”… nosoratan'i nesco1612
Cate mahatsiravina ianao, misaotra anao tamin'ny famakianao. Mahatalanjona ianao !!! ” … Nosoratan'i rjjimenez
Mpamaky tsara sy marina. ” … Nosoratan'i veezee
Convo mahafinaritra, Thx Cate ”… nosoratan'i jaykun
Nahitsy tamin'ny zavatra noteneniny. Nanoro hevitra azy aho. ” … Nosoratan'i causeimdopee
Tsara izy milaza ……. Manana traikefa tsara aho…. ” … Nosoratan'i zakihassan
Mpamaky be pitsiny sy be fangorahana. Hiverina tokoa !! " … Nosoratan'i brokenhearted118
Tena nanampy be izy! Misaotra betsaka amin'ny torohevitra sy famakiana. Manantena aho fa ho tanteraka daholo izany. Mamerina ny fisaorana anao!" … Nosoratan'i Lpap116
Mamaky soa amin'ny vidiny lafo. ” … Nosoratan'i Scorpio1112
Afaka nanampy ahy be i Cate rehefa nanana pvt niaraka taminy aho. Satria ao amin'ny freechat izy, tena nanampy be i Cate ary voavaha ny olako. Isaky ny manana olana aho dia fantatro fa afaka miresaka amin'i cate foana aho ary hanampy ahy izy. Na ny karatra na ny fiainana izany dia azoko ianteherana amin'i Cate ary heveriko ho namana tsara izy. ”… Nosoratan'i TattooedTex
Great !!!! " … Nosoratan'i veezee
Fantany ny entany! ” … Nosoratan'i nixter1994
Heveriko fa tsara izy ary nanampy ahy ny sasany. ” … Nosoratan'i pcmomof6
Toa afaka nanaraka an'io toe-javatra io izy. ” … Nosoratan'i carolyneclark
Tsara fanahy be izy ary nahatonga ahy hahatsapa ho salama kokoa. Tsy andriko izay hahitana izay mitranga. ” … Nosoratan'i chapara5480
Marina 100% izy, tena faly aho ary miadana amin'ny zavatra ho avy. ”… Nosoratan'i chapara5480
MAHAFINARITRA, MAIKA INDRINDRA; ) ”… Nosoratan'i kittyfer5
Tsara fanahy izy ary manantena aho fa hanampy :) ”… nosoratan'i prismedwhole
Misaotra indrindra anao. ”… Nosoratan'i gurushek
Mpamaky mahavariana! Andramo izy, gaga aho. Tena marina. Misaotra anao. ”… Nosoratan'i vjrei01
Shes tsara. Misaotra anao. ”… Nosoratan'i stebella009
Vehivavy mamy izy ary tena tsara. Shes tia, mahafatifaty ary mahafinaritra sy manampy ny manodidina. ” … Nosoratan'i TristanLucas
Tena tsara sy mora ny miresaka. antenaina fa hiverina tsy ho ela ny raharaha ”… nosoratan'i chapara5480
Mahagaga tokoa izy !! Tena tena izy koa, misaotra anao tamin'ny famakiana, Cate :-) ”… nosoratan'i MagpieJordan
Misaotra indrindra. ” … Nosoratan'i stevecahill
Misaotra anao amin'ny famakiana mahafinaritra! ” … Nosoratan'i Helgaz1
Famakiana mahafinaritra tokoa, Cate marina amin'ny vola amin'ny maha-marina azy. Handray ny toroheviny aho ary hiandry ny fanarahan-dia. ” … Nosoratan'i corvettime02
Love cate dia tsara foana izy ary vonona hanampy anao hatrany na inona na inona ny mari-bola azonao… ”… nosoratan'i Anniekins
Tena tsara fanahy sy marina i Cate. Tena miahy izy ary lasibatra. ” … Nosoratan'i leslie77
Tena miombom-pihetseham-po i Cate ary nahafinaritra ny famakiny :) ”… nosoratan'i milona
FIKAMBANANA hafa mahomby miaraka amin'i CATE. TENA MAHATELAKA IZY. Misaotra anao KATE. ” … Nosoratan'i corvettime02
Misaotra noho ny hevitrao. hitazona anao hatrany ary manantena fa handeha tsara ho ahy ny zava-drehetra. Tena tia anao ary manoroka 4 anao mandrakariva. Milamina. ” … Nosoratan'i am3thyst
Afaka mahatsapa mafy zavatra hafa manan-danja kokoa noho ny fanontaniako izy. afaka manome fampahalalana bebe kokoa izay mahasoa amin'ny fiainako izy. tia manao fa tsy manao. ” … Nosoratan'i blueberi
Nahagaga ahy ny LightCate ary nieritreritra aho fa vehivavy tsara sy manampy be izy. ” … Nosoratan'i Gen144
Ny mpamaky karatra tsara indrindra amin'ny vehivavy manan-talenta ”… nosoratan'i joeymas343
MAHAY MITSITRAKA !!!!! Tsara sy be fiahiana i Cate, tena manampy ahy izy ary tena atoroko! ” … Nosoratan'i marionlyttle
Misaotra anao cate fa ianao no mahafatifaty indrindra ary fitarihana lehibe sy fitarihana lehibe manome ny vaovao tsara foana ny karanao ary ho marina foana… ”… nosoratan'i Anniekins
Nahazo mari-bola maimaim-poana aho, noho ny oranum, ary afaka namaky maimaim-poana niaraka tamin'i Cate aho. Haingam-pandeha i Cate ary tamin'io fotoana io dia traikefa nahafinaritra niaraka tamin'i Cate izany, ary faly aho fa nahazo fotoana niresaka taminy. Misaotra Cate :) ”… nosoratan'i AppleBite707
Misaotra ”… nosoratan'i katie46
VAKIO NY FAMAKIANA LEHIBE, Ilaina ny banga avy amin'ny fiainako, MBOLA HITADIAVA NY REHETRA MBA HANOMPO AN'ANDRIAMANITRA. … Nosoratan'i queenbee22
Manome, Hevitra lehibe! Misaotra anao tamin'ny fampahalalana. ” … Nosoratan'i queenbee22
Ramatoa mahatalanjona mahatalanjona. Mikarakara sy mafana. Mahatsiaro ho tsara lavitra noho ny niresaka tamin'i Cate aho. ” … Nosoratan'i DebraDee
Desambra 26, 2017 amin'ny 6: 54 pm
Tena nahafinaritra ianao! Ampio aho ary azoko tsara ny valin'ny fanontaniana roa. Misaotra anao! Misaotra anao!" … Nosoratan'i Barr88
Lightcate dia fanahy tsara fanahy manana fanomezana mahatalanjona! Torohevitra marina sy mahasoa 🙂 Mamporisika azy mafy aho. ”… Nosoratan'i vanessailgms11
Tena nanampy tokoa ny LightCate. Afaka nifandray tamiko sy ny sakaizako izy. Nanampy ahy nametraka ahy tao an-tsaiko ianao mba ho tonga naman'ny vadiko. Misaotra hatrany… Mike ”… nosoratan'i 3427n8qbb
Anjely any Oranum. ” … Nosoratan'i lingearthy
Lady tonga lafatra. Hevitra lehibe… mavitrika sy mahafinaritra. ” … Nosoratan'i lingearthy
Tsara be izy. Tena marina ny zavatra nolazainy. ” … Nosoratan'i dahun001
Amazing. " … Nosoratan'i Chloe1212
OLANA LEHIBE. Fikarakarana sy fahazoana. TENA TE HANAMPY. ” … Nosoratan'i blackty100
Tena tsara izy, nanome torohevitra tsara ho ahy ary niezaka nanampy ahy tamin'ity toe-javatra ratsy ity. Misaotra betsaka anao. Hiverina indray aho izao. ” … Nosoratan'i Pam_mie
Misaotra Light Cate! Nanazava ny toe-javatra nisy ahy ianao. Mahatsiaro ho tsara kokoa aho ary manana fanantenana izao. Misaotra anao noho ny torohevitrareo ary hanandrana aho. Ampahafantariko anao ny niafaran'ny zava-drehetra :))) Mirary tontolo andro sambatra tsara! ”… Nosoratan'i mare1971
Tena tsara, marina marina ”… nosoratan'i primohw
Heveriko fa vehivavy tsara fanahy be izy, izay nanome sosokevitra tena tsara ary niezaka nanampy ahy tamin'ny fomba tsara indrindra, azony natao. Hanoro hevitra azy aho. ” … Nosoratan'i maria19k
Tsy maintsy holazaiko hatrany hatrany fa izy no mpamaky tarot tsara indrindra hatramin'izay! Afaka mahita ny zava-misy izy izao sy any aoriana. Tena mahavariana ny asany! ” … Nosoratan'i amnarashid
Tena tsara!" … Nosoratan'i joeymas343
Anjely izy. Angovo tena miabo. Mihaino tsara ary olona mahay. ” … Nosoratan'i lingearthy
Maranitra toy ny mahazatra izy. Azony omena ahy avy hatrany ireo valiny. ” … Nosoratan'i blueberi
tena tsara azoko antoka fa tanteraka ho ahy ireo rehetra ireo !!!! thnk u ”… nosoratan'i thumbzee84
Famakiana tena nahafinaritra izany. Misaotra anao!" … Nosoratan'i dushka
Tiako be ny mifampiresaka amin'i Cate, isaky ny misy olana aho dia eo izy manampy ahy amin'izany. ” … Nosoratan'i TattooedTex
Tena ny tsara indrindra hitako !!! Tena marina i Cate ary marina daholo izay lazainy !! Wow Gaga aho amin'ny talentany. Izy no tena tsara indrindra ary tena manampy be. Mbola tsy mino an'izany aho! Omeo azy ny kintana 10 miampy plus !!! Tena gaga aho tamin'ny Cate. Tsara ry Cate, ianao no tsara indrindra hitako, ary ity no fanamarihako marina. Mahatsiaro ho tsara kokoa aho taorian'ny resadresaka manokana. Misaotra, misaotra betsaka an'i Cate malalako !!!!!!!! Ilay tsara indrindra, mamihina an'i Annie1965 ″… nosoratan'i annie1965
Naoty kintana 5 ho azy. Tena tsara fanahy sy mahatakatra tokoa izy. Manazava toy ny reny amin'ny zanaka. Mahagaga. Tena faly aho fa mahatakatra ahy izy ary manazava tsara. ” … Nosoratan'i deepakrishna
Tena mifototra amin'ny zavatra ahiahiako tamin'ny toe-javatra nisy ahy ary tsara tarehy aho raha manome torohevitra izy. ” … Nosoratan'i spiritual_seeker
Marina foana izy. ” … Nosoratan'i veezee
Misaotra anao! Famakiana mahafinaritra :) ”… nosoratan'i Jodyleelee
Haingam-pandeha izy ary be fiahiana ary tsy mivadika amin'ny fahatsapanao izay fantany izay lazainy. Tia anao LightCate. :) ”… nosoratan'i FallingFairy
Tena tsara!" … Nosoratan'i katehrine1965
Lighgate dia toy ny namana tsara, marina sy be fiahiana. Mora miresaka, ary tena marina. Tsara izy! ” … Nosoratan'i darlinhun
Mamaky soa, misaotra betsaka amin'ny fitarihanao. ” … Nosoratan'i novMoon
Izy no iray amin'ireo mpamaky tarot tsara indrindra. Tonga tany amin'ny famoizam-po aho namela fanantenana sy toky. Tonga teny an-toerana niaraka tamin'ny antsipirihany izy. Tsy nilaza na inona na inona taminy akory aho. Hitany tamin'ny alàlan'ny karany ny zava-drehetra. Ny zavatra tsy fantatry ny maro hafa dia marina tamin'ny vola tamin'ny antsipirihany rehetra. Tsy afaka miteny aho fa misaotra ampy anao noho ny fitiavany sy ny fahamarinany! ”… Nosoratan'i amnarashid
LightCate dia nanome ahy fahitana tena sarobidy momba ny hoaviko amin'ny ho avy amin'ny 2013, ary ny famakiana nomeny dia tena nanampy. Kintana 5 ary mikasa ny hiverina any aminy hamaky famakiana hafa ”… nosoratan'i nanobytecure
Misaotra anao namaky! ” … Nosoratan'ny mpiray dina
Tsy ratsy mihitsy ity mpamaky ity !! ” … Nosoratan'i gp
Tena tsara izy. ary mazava. ary haingana. ary tena manampy tokoa. tena olon-tiana. hamaky miaraka aminy indray… ”nosoratan'i newness
Haingana sy fohy dia fohy .. ”… nosoratan'i mashmellowbunni3
Nahaliana ahy ny cate nandritra ny fotoana kelikely ary nanapa-kevitra ny handray famakiana avy aminy aho satria misy famerenana tsara. Cate dia manoratra haingana, marina ary tena manampy amin'ny lafiny rehetra. misaotra ary ny ahy manana fitiavana sy fahazavana koa ianao noho ny fanampiana rehetra nataoko tamiko! ” … Nosoratan'i intrigueme184
Tena manazava. Vehivavy be fikarakarana mahafinaritra. Tena tiako ity famakiana ity - Misaotra betsaka, Cate !! Tohizo ny asa tsara :)) ”… nosoratan'i pluto121
Tiako i Cate satria manampy be dia be foana izy. ” … Nosoratan'i FallingFairy
Mpamaky mahay izy. afaka milaza ny toe-javatra misy olona iray izy ary manome anao vahaolana. mahitsy izy ary mailaka. ” … Nosoratan'i blueberi
Inona no azo lazaina wow, mahafinaritra. ” … Nosoratan'i lorichad36
Salama Cate 🙂 Nampanantena valiny fohy aho, ka eto aho aorian'ny 6 volana. Tokony hiaiky aho fa tsy mbola faly toy izao tamin'ny fiainako manontolo. Misaotra betsaka anao aho noho ny nanampianao ahy hanafaka ny tahotro ary hiverina aminao tokoa aho, satria mbola misy ampahany amin'ny fiainako tiako hamboarina. Mila ny fanampianao sy manoro hevitra anao aho. Misaotra anao indray, tena be dia be! ”… Nosoratan'i Witzuschka
Tsara sy tsara fanahy! ” … Nosoratan'i aquestion76
Mpamaky tsara, tena Marina, haingana be ary hatramin'ny farany dia hiverina aminy tokoa. ” … Nosoratan'i Need2 Know5
Mahafinaritra, misaotra anao kateeeeee 🙂 xx mahavariana ”… nosoratan'i Jodyleelee
Misaotra anao …… amin'ny teboka toy ny mahazatra…. ” … Nosoratan'i clearblu
Tiako izy namaky. tena marina sy marina. fifandraisana eo noho eo…. ”… Nosoratan'i clearblu
Ramatoa tsara fanahy sy mahatakatra izy. Nanampy ahy tamin'ny fametahana challanges vitsivitsy izy ary niasa tamin'ny faharetako nefa vonona ny ho namana tsara foana. Manoro hevitra mafy aho. ” … Nosoratan'i dle55555
Cate tsara tarehy miaraka amina fo mahafinaritra dia milamina foana ary mifandray dia tia ny famakiny sy ny fitarihany hatrany ary miverina any aminy foana aho isaky ny mila torohevitra… ”… nosoratan'i Anniekins
Torohevitra tsara! ” … Nosoratan'i lucky983
Mamaky teny tsara! ” … Nosoratan'i DUNNO85
Insightful ary tena manampy! Misaotra betsaka: D ”… nosoratan'i RuinofDarkness
Mamaky teny tsara! ” … Nosoratan'i Bojan99
Tena matihanina sy maty amin'ny zava-drehetra… Tena tiako ny famakiko ary hiverina tsy ho faty aho… Misaotra hazavana… hanokatra varavarana vaovao aho ary hanidy ilay avy ao aoriana. ” … Nosoratan'i kristinaison
Mahafinaritra ery!!!" … Nosoratan'i skf271
Very spot on, haingana, mivantana, tia ny heriny, hiverina aho hamaky iray hafa amin'ny ho avy. ”… Nosoratan'i leti8989
Tena tsara ianao… Misaotra! ” … Nosoratan'i blackangel_bebe
Tsara izy! ” … Nosoratan'i Member625811
Tsara ny famakiako… Miandry ny taona 2013… Marina no tsy maintsy holazaiko, alao aminy ny satroka! ” … Nosoratan'i coolstallion
Misaotra betsaka… Fanamaivanana tokoa! ” … Nosoratan'i blackangel_bebe
Ramatoa tsara tarehy, mpamaky xxxxxx mahafinaritra…… nosoratan'i suertemia
Fahafinaretana foana. Ka marina ary amin'ny teboka. Tsy handany ny fotoananao na ny volanao izy. ” … Nosoratan'i newness
Fampahalalana tsara tokony ho fantatro. ” … Nosoratan'i ChristineLazzaro
Fanavaozana tsara! Misaotra anao amin'ny antsipiriany! ” … Nosoratan'i queenbee22
Misaotra anao, mamaky marina tokoa, faly aho fa nifidy anao. ” … Nosoratan'i novMoon
Tsara izy !!! Misaotra betsaka tamin'ny famakiana !! ” … Nosoratan'i gerritmarx
Tena tsara ”… nosoratan'i chandragomes3
Tena nahagaga tokoa, nahafantatra ireo olana tao amin'ny fanambadiako ary nanondro ny drafinay hanavao ny voadinay ary hanomboka vaovao. Nolazainy fa izany no fanapahan-kevitra mety. Misaotra anao!" … Nosoratan'i KristenOD325
Tena nahagaga sy marina izy. Nametraka fanontaniana be dia be aho andamp; tena nanamaivana ny tahotro sy ny ahiahy izy. ”… Nosoratan'i kimmy33
Mpamaky tsara! Nanazava ny toe-javatra tamiko tamin'ny fotoana fohy toy izany. Misaotra anao nanampy anao:) ”… nosoratan'i Godsangels
Eo no ho eo !! Tena marina sy marina, tsy misy ambadika. ARAKA NY TORATRA! Tena feno fankasitrahana noho ny fanampiany sy ny fahamarinany. Tena manoro hevitra tokoa! ” … Nosoratan'i SuzOKeeffe
Haingam-pandeha izy ary nahafinaritra azy ny namaky azy. Misaotra anao!" … Nosoratan'i newnameok
Tena marina miaraka amin'ny karany, ho hitako izay hitranga amin'ny ho avy. Misaotra Cate. ”… Nosoratan'i safira456
Vehivavy mahafinaritra, tena mifandray amin'ny toe-javatra ary milaza azy ny anton'izany. Manoro hevitra ny rehetra aho mba hanandrana azy .. Misaotra an'i Cate xx ”… nosoratan'i ladybird05
Misaotra, afaka mahita ny zavatra tsapako izy! ” … Nosoratan'i DUNNO85
TIA ITY VEHIVAVY ITY. MPAMAKY LEHIBE LEHIBE IZANY ARY MPAMAKY LEHIBE, ARY OLOM-PAHATELO TSY MISY REHETRA AMIN'NY FAMAKIANA IZAO! ” … Nosoratan'i newness
Tena mahafinaritra izy ary fantany! Hiverina bebe kokoa aho! Misaotra anao !!" … Nosoratan'i kimmy33
Nanampy ahy be dia be izy, ary hiverina hanampy azy amin'ny manaraka aho! ” … Nosoratan'i catieslim
Misaotra anao nanampy. ” … Nosoratan'i joey198402
Nanampy be ahy tamin'ny olako izy. marina ny famakiany ny lasako ary manantena aho fa ho tanteraka ihany koa ny famakiany ho avy. tsara be koa izy. ”… Nosoratan'i hazelziggy
Tsara izy, tiako ny zavatra nolazainy tamin'ny famakiny! Misaotra an'i Cate! ” … Nosoratan'i stella2011
LightCate dia zavaboary tena mahafinaritra sy falifaly. Vehivavy tsara fo izy ary tena manampy be foana. Manome anao bebe kokoa noho ny angatahinao aminy foana izy. Ary ny faminaniany dia tanteraka amin'ny fomba nitenenany azy taminao. Manao ny zavatra rehetra izy ho an'ireo olona hitodika any aminy amin'ny olany. Koa mamporisika azy ho an'ny rehetra aho. Misaotra anao LightCate. Ary Andriamanitra hitahy anao. ” … Nosoratan'i ambriel1
Tena mahavariana izy, tiako izy… Omeko kintana 5 izy. Namaha haingana ny olako izy ary nanome ahy ny torohevitra tsara indrindra! ” … Nosoratan'i anniekazmi88
Tena lalina, mamaky tsara! Ramatoa tena tsara sy mahafinaritra! Misaotra anao Cate !!! ” … Nosoratan'i speakone
Marina nefa somary miadana, tena tsara nefa ary mendrika ny vola! ” … Nosoratan'i Love_Life
Lightcate dia tena nanampy tamin'ny valin'ny fanontaniako ary nanome ahy fahitana bebe kokoa momba izay angatahiko. Afaka nilaza tamiko zavatra izay fantatro momba ny olako fotsiny izy. Mahita ny zavatra ataony rehetra izy ary atoroko azy amin'ny olona rehetra izy. ” … Nosoratan'i damo70
TSARA TSARA NY MAZAVA TANINDRAZANA DIA AZONY !!! MANKASITRAKA TAHAKA NY MAZAVA! ” … Nosoratan'i yto_84
Ny famakiny dia nahalalàm-baovao tokoa Novakiany fatratra ny taratasiny nefa tsy nisy fanontaniana tokony hapetraka. Misaotra anao namaky mahafinaritra, nandanjalanja sy nanampy. ” … Nosoratan'i Enkori
Misaotra betsaka, nankasitrahako ny nanomezanao mazava ahy. ” … Nosoratan'i santhia1989
Nanombatombana haingana ny toe-javatra nisy ahy i Cate ary marina tamin'ny zavatra hitany - na ny lafy ratsy aza. Gaga aho ary hiverina mandritra ny fotoana lava kokoa. ”… Nosoratan'i JacquiA
Lovely! Nanome toky ahy izy fa hiverina ny saka tsy hita afaka 2 andro milamina ary tafaverina afaka 12 ora taty aoriana. Tena feno sy tsara fanahy. ”… Nosoratan'i stinkykitties
Izy no tsara indrindra avy eto. ” … Nosoratan'i yto_84
Mahagaga izy, nahita ny zava-drehetra. Tena manampy amin'ny fanontaniako rehetra. Fantaro izay rehetra eritreretiko sy izay nitranga. MAHAGAGA .. Hiverina hamaky famakiana hafa indray aho. ” … Nosoratan'i Sophia1984
Hitany tokoa ny olako. ” … Nosoratan'i epilock
Cate dia mahatalanjona tokoa. Tia azy! ”… Nosoratan'i anniekazmi88
Tsara fanahy be i Cate ary marina sy marina. Tonga tany aminy aho niaraka tamin'ny toe-javatra sarotra ary tsy nitsara izy fa nilaza tamiko marina ny zavatra hitany ary tena marina sy nahita fahitana ary niresaka tamiko tamin'ny farany rehefa nanazava ny zava-misy aho momba ny fomba hieritreretany bebe kokoa azy ary hiverina any izaho - na dia taorian'ny nahavitan'ny fivoriana aza. Tsy afaka midera an'i Cate loatra aho. Ramatoa manan-talenta fanomezana sy mangoraka! ” … Nosoratan'i HelenaLatina
Tena tsara sy marina, iray amin'ireo tsara indrindra ao Oranum! Misaotra anao!" … Nosoratan'i In_Search33
Tiako i Cate tena mamy izy. Tena manampy be izy. Tia anao Cate. Mahavita azy ianao. Kintana 5 azo antoka. ” … Nosoratan'i TylerFrost
Misaotra anao Cate! Famakiana mahafinaritra! Cate dia mamiratra, mahita sy marina foana! 🙂 Mendrika izany izy. Misaotra Cate, hiverina aho. xx ”… nosoratan'i Jodyleelee
Famakiana tsara, miaraka amin'ny vinavina! :) ”… nosoratan'i yvettepandora
Tena tsara sy tsara fanahy. Tena matotra sy haingana! Famakiana sy torohevitra mahafinaritra. Vaovao marina. Manoro hevitra aho hamaky. Misaotra betsaka tamin'ny fanampianao! ” … Nosoratan'i zimerili1
Famakiana tsara, marina ary misy fampahalalana, manondro ny momba ny fianakaviana sy ny fifandraisana. Misaotra anao Cate. ” … Nosoratan'i new
Nazava be izy, milaza ny marina! ” … Nosoratan'i yto_84
MAZAVA FAHAMARINANA tokoa ny hazavana! TENA Nahafinaritra ahy ny famakiako azy! Misaotra betsaka anao CATE …… 5 STARS !!! ” … Nosoratan'i qndiva
I Cate no namako akaiky indrindra eto Oranum! Izy dia fanahy mahatalanjona manan-talenta, mangoraka ary tsara tarehy ao anatiny. Mamorona fifandraisana mahafinaritra amin'ireo mpanjifany izy ary mitady ny hikarakara azy ireo marina. Manolotra torohevitra faran'izay tsara sy marina miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana izy ary manao izany amin'ny fomba fangorahana indrindra azo atao! Tena tia sy manaja an'i Cate aho 🙂 🙂 🙂 Manantena aho fa homenao azy ny fotoana hanampiana anao; ary manome lanja azy toa ahy. Fitiavana sy fahazavana ho anao Cate, toy ny mahazatra 🙂 🙂 🙂 Manamboatra ny androko isan'andro ianao 🙂 🙂 🙂 bless Andriamanitra hitahy anao ary tiavo hatranyxoxoxoxoxoxoxo ”… nosoratan'i neenzbeanz
Tena tsara!!!! Ampirisiho izy, tena marina. ” … Nosoratan'i tizzybb
Tena tsara sy haingana. Manome fampahalalana marina amin'ny fotoana fohy ho ahy. Tena tsara!" … Nosoratan'i georgiapeach37
Misaotra anao cate. ” … Nosoratan'i ale510
Tena manampy sy be fiheverana izy. Nandany ny fotoanako ary rehefa hitany fa misy zavatra hafa tsy maintsy fantatro, hoy izy tamiko. Tena nitomany aho rehefa avy namaky satria nanohina zavatra tena tao am-poko izy. Tena tiako izy ary ho avy indray. ”… Nosoratan'i bossy0taylor
Ny hany azoko lazaina dia wow! famakiana mahafinaritra tokoa, marina sy marina tokoa izy. Manoro hevitra azy tanteraka aho ”… nosoratan'i dimples101
Wow, psychic tena tsara sy mahafinaritra tokoa! ” … Nosoratan'i HollyB123
Famakiana fitiavana miaraka amin'i Cate! Hita mialoha ny faminaniana 🙂 Mahafinaritra sy mahafinaritra izy! Misaotra, Cate! ”… Nosoratan'i Jodyleelee
Tena manazava sy mifanaraka amin'ny fihetsem-pon'ny olona noresahiko. Nanome torohevitra marim-pototra izy mifototra amin'ny zavatra notsongainy tamin'ny toe-javatra. Tsy andriko izay valiny. Misaotra. " … Nosoratan'i youniquenubian33
Marina sy tena mamy fo. Napetrany moramora ny fanahiako. Misaotra anao!" … Nosoratan'i In_Search33
Mpamaky haingana haingana. ” … Nosoratan'i LYDIA71
Famakiana mahafinaritra indray :) ”… nosoratan'i Aryastark
Tonga lafatra, andramo izy! ” … Nosoratan'i Aryastark
Tena nanampy sy tsara fanahy izy, andramo! ” … Nosoratan'i ivanna678
Famakiana mahafinaritra !! ” … Nosoratan'i bacardibabe
Mamaky teny tsara! ” … Nosoratan'i druvina1973
Tena tsara fanahy izy, sariaka ary marina. Manoro hevitra azy aho :) ”… nosoratan'i nalita18
Famakiana tena tsara .. nandeha haingana… dia hiverina indray. ” … Nosoratan'i polly1979
Misaotra betsaka an'i Cate amin'ny famakiana. Nisy famakiana nataoko talohan'ity niaraka taminao ary hiverina aho. Misaotra betsaka ihany koa. ” … Nosoratan'i ale510
Ny Cate malalako dia hitany tanteraka sy tanteraka tamin'ny zava-drehetra !!!! 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 Faly be aho fa afaka nanazava ny androny tamin'ny vokatra tsara izay nolazainy mialoha !!! Tena mamporisika an'i Cate aho satria tena manan-talenta, hendry ary mahafatifaty, fanahy mahafinaritra 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 Tena tiako sy hajaiko izy ary vao mainka aza mitombo isan'andro isan'andro 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 Fitiavana sy fahazavana ho anao hatrany, Cate malala !!!! 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 xoxoxoxoxoxo ”… nosoratan'i neenzbeanz
Mahagaga tokoa! Nametraka ahy tamin'ny làlana tsara niaraka tamin'ny orinasako sy ny asa soratro aho. Hevitra sy fahitana tsara. Misaotra anao! Ho vita afaka 3 volana ny boky! ” … Nosoratan'i 1motivatedmom
Nice! " … Nosoratan'i CaseyN
Tena tsara ary tonga hatrany amin'ny resaka izy. ” … Nosoratan'i vonjay1990
TENA-TENA TENA !! TENA MARINA TENA !! FANTATRA IZY REHETRA !! TENA NASAINA - TIA NY ASANY !!!!!!!!!!!!!!! ” … Nosoratan'i christina
Tena amin'ny teboka sy fahatakarana, Cate dia mendrika handany fotoana miaraka! :) ”… nosoratan'i sim079
Mamaky tsara! ” … Nosoratan'i irahow777
Tena feno pitsopitsony ary toa tena miahy izy, nanome torohevitra ahy! ” … Nosoratan'i bermt86
Mamaky tsara… Ny famakiana farany nataoko dia nanambara zavatra maro izay tsy fantatro. Misaotra x ”… nosoratan'i librabeauty
Misaotra anao indray. ” … Nosoratan'i corvettime02
Mamaky tsara toy ny mahazatra, misaotra an'i Cate. ” … Nosoratan'i corvettime02
Famakiana tsara dia marina. ” … Nosoratan'i irahow777
Nitondra zavatra tena marina momba ahy nefa tsy nilazako momba izany. Fantany izay noeritreretiko tato ho ato. Zavatra tsara. Valiny marina amin'ny fanontaniana sarotra. Misaotra anao! ”… Nosoratan'i king_seti
Cate dia fahafinaretana tanteraka hiresahana, misokatra be, miahy, mana-tsaina ary mametraka fanontaniana mety. Hitsidika indray aho! ” … Nosoratan'i PikeyMikey25
Famakiana tsara ary mifanaraka hatrany. Tena mangoraka sy manam-paharetana i Cate !!! ” … Nosoratan'i speakone
Misaotra betsaka anao amin'ny LightCate, ny famakinao dia tena marina sy marina, nahatonga anao hahatsapa ho azo antoka kokoa amin'ny fifandraisako .. Tena tia kokoa noho ny taloha isika… Tena mahafinaritra izahay ary manoro hevitra ny olona rehetra manana famakiana avy aminao LightCate U marina, tsara fanahy ary be fiahiana, ary mitsikitsiky mahafinaritra ihany koa… Misaotra betsaka xx mwah ”… nosoratan'i tabbyweedatsme
LightCate dia mpamaky marina mahatalanjona tokoa. Manantena aho fa hanana crédit bebe kokoa aho fa tena hanana famakiana hafa miaraka aminy tsy ho ela. Misaotra anao!" … Nosoratan'i success168
Famakiana tsara ”… nosoratan'i angelzone
Famakiana lehibe. marina tokoa amin'ny teboka rehetra. Tena hanome sosokevitra aho. ” … Nosoratan'i angelzone
Ramatoa tena tsara. Marina, angamba marina indrindra amin'ity tranonkala ity. Def. Hampiasa azy indray. ” … Nosoratan'i gina733
Tena tsara izy… Misaotra :-)))) ”… nosoratan'i lindaleah123
Cate dia mamirapiratra sy be fiahiana, manome valiny mazava! :) ”… nosoratan'i HollyB123
Mamaky teny tsara. ” … Nosoratan'i spiritual_seeker
Tsara. " … Nosoratan'i Majoma
Mampino mahatalanjona mahatalanjona! tena fahitana! tsindrio izy tsindrio azy! ” … Nosoratan'i purplecloud
Amazing! Tena manoro hevitra tokoa! ” … Nosoratan'i dalaila22
Mpamaky tsara. ” … Nosoratan'i Need2 Know5
Tena tsara, karazana fast andamp; manampy! " … Nosoratan'i meloye123
Tena tsara, tsara fanahy, mahatakatra. ” … Nosoratan'i tk40000
Vehivavy tena mamy !! ” … Nosoratan'i Patricia24c87
Mahafinaritra. ” … Nosoratan'i tmb112924
Mbola nanampy ahy be indray izy. Tiako ny miresaka aminy, ary be ny valiny nomeny ahy. ” … Nosoratan'i blueberi
Tena tiako izy. ”… Nosoratan'i anniekazmi88
Namaky be aho. Misaotra anao nanampy." … Nosoratan'i allisonelle
Tena marina, mamaky mahafinaritra, misaotra. ” … Nosoratan'i cb1987
Tiako be izy ary miverina any aminy foana ny fanontaniana. ”… Nosoratan'i Majoma
Cate dia mpanolotsaina tsara hatramin'ny nanombohako nifampidinika taminy ary mandraka androany dia naharitra izy, nangoraka ary tena marina. Ireo zavatra nolazainy tamiko fa hitranga ary tsy mbola faly sy faly be toy izao aho …… .Misaotra Cate !!! ” … Nosoratan'i 1realwon
Misaotra an'i Cate amin'ny famakiana mahafinaritra! ” … Nosoratan'i bonbon2012
WOW!!!! Ramatoa mamy !! Tena marina amin'ny faminaniany dia manome toky azy aho fa mendrika ny vola izy! :) ”… nosoratan'i tizzybb
Famakiana tsara sy tena amin'ny an-tsipiriany, Ramatoa tsara tarehy, nahafinaritra azy tamin'ny famakiny. … Nosoratan'i veezee
WOW!!! mahatalanjona… tsy mampino mitady azy ………. ” … Nosoratan'i purplecloud
Tena tiako ny famakinao, misaotra betsaka tamin'ny fanampianao! ” … Nosoratan'i Laurenmichelle21
Tena teo i Cate ary azony haingana ny toe-javatra nisy ahy. Nanampy ahy hahalala ny toe-javatra misy ahy. ” … Nosoratan'i paral04
Famakiana tsara iray hafa avy amin'ny LightCate. Mahatsiaro ho tsara kokoa aho amin'ny fahafantarana fa manana mpamaky marina aho. Misaotra an'i Cate indray! TAHIN'ANDRIAMANITRA!" … Nosoratan'i success168
Tena tsara - tiako izany! ; D Tena tsara Ramatoa! ; D ”… nosoratan'i Alexsandra_14
Mahafinaritra, misaotra! ” … Nosoratan'i alexahatz1
Mamaky tsara! ” … Nosoratan'i jimikuta
Mahatalanjona, tena hiverina hiresaka! ” … Nosoratan'i brandyowens7607
Tena tsara." … Nosoratan'i smileysteph123
Mahagaga, mahafinaritra ”… nosoratan'i alexahatz1
Misaotra Cate! ”… Nosoratan'i gurushek
Mahagaga izy !!! Nanampy ahy be dia be izy mahalala izay ataony. Ramatoa tena tsara be! Manokana fotoana hihainoana izy ary hamaly tsara ireo fanontanianao. Misaotra betsaka Cate !!! ”… Nosoratan'i chikitaboom
Ity vehivavy ity no nanao ny androko androany. Vaovao mahafinaritra. Saingy tokony holazaiko fa izy dia mpitondra vaovao ratsy taloha ary tena marina ny faminaniany. Tena mendrika ny vola, izy dia tena feno sy intuitive! ”… Nosoratan'i librabeauty
IZY NO PSYCHIKA MARINA AN'IZANY SITRA IZY ARY TIA AZY KOKOA !! " … Nosoratan'i sweetally
Misaotra anao Cate! Marina foana ny anao! ”… Nosoratan'i 1motivatedmom
Olona mahafinaritra! Tonga dia eo ary eo no maharary. " … Nosoratan'i MelodyMartinez
Mamaky teny mahafinaritra sy milamina tokoa. ” … Nosoratan'i mi
Tsara sy marina ny valiny ”… nosoratan'i fresiaflower
Cate! Te hanana famakiana mailaka avy aminao aho saingy tsy manana izany safidy izany ny mombamomba anao…. ” … Nosoratan'i alexahatz1
Tena ara-potoana! ” … Nosoratan'i angelzone
Serivisy lehibe ary tena tso-po. ” … Nosoratan'i OLAMOTIL
Famakiana mahatalanjona ”… nosoratan'i starchild700
Misaotra betsaka anao, ary feno fankasitrahana aho. ” … Nosoratan'i 108_ honesty
Mandrosoa hatrany amin'ny famakiana, ary eny! Handray anao amin'izany tolotra izany aho. Tena mahafinaritra ianao. Misaotra anao! Ho an'izay rehetra hamaky an'ity dia tsy hiala tsiny ianao raha mitondra an'i Cate any amin'ny toerana miafina. ”… Nosoratan'i silverfae
Famakiana marina tsara toy ny mahazatra. ” … Nosoratan'i veezee
Wow, mamaky tsara sy torohevitra tena tsara tsy maintsy lazaiko. Manoro hevitra azy aho hamaky! ” … Nosoratan'i CerseiLannister
Mpamaky tena tsara, jereo eo. ” … Nosoratan'i Jelz
Tena maty tamin'ny famakiana, fa tamin'ny ankapobeny dia tena voafaritra tsara ihany koa. ” … Nosoratan'i Alexis
Tsara fanahy be izy! Tena manoro hevitra ny xxx aho Misaotra xxx ”… nosoratan'i tysonandblue
Excellent! Nanampy ahy be dia be izy! ” … Nosoratan'i Patrice
Tena marina foana… .pamakizay ny mpamaky tiako indrindra! ” … Nosoratan'i Teresa
Tena tsara!" … Nosoratan'i medium
Tsara izy! Mahatoky azy aho! ” … Nosoratan'i virgogoddess
Mahagaga sy tsara fanahy izy… ”… nosoratan'i charme
famakiana mahafinaritra, tena faran'izay… .. ”… nosoratan'i zimerili1
Ramatoa vehivavy toy ny mahazatra, tia manampy, sariaka, manam-paharetana… .. ”… nosoratan'i Pikey Mikey
Noraisiny haingana dia haingana .. Tena tiako izy ary tena manoro hevitra. Manomeza torohevitra tsara ary tena hanaraka ny torolàlana hanampy hanatratra ny tanjoko. Misaotra indrindra anao!!" … Nosoratan'i Srunion
Misaotra an'i Cate, mpamaky mahafinaritra ianao, marina haingana ary tsy manam-paharoa. Misaotra indrindra anao tamin'ny famakiana !! ” … Nosoratan'i ik royal
Mpamaky tsara! Tia azy." … Nosoratan'i starchild700
Tsara be ianao. Misaotra betsaka "… nosoratan'i Denise
Tena marina! ” … Nosoratan'i neha
Cate, ianao no mpamaky ahy. Tiako ny fomba ifandraisanay. Misaotra hatrany ”… nosoratan'i newness
Ny ankamaroany dia manoratra valiny, izay tsara. Nanana olana tamin'ny fahazoako ny serasera nataony aho; nisy sakana kely tamin'ny fiteny, izay indraindray amin'ny famakiana, na dia mitovy aza ny tenindrazana. Haingam-pandeha izy, feno sy be fiahiana. Tiako izy ary mieritreritra fa fantany tsara ny zavatra ataony. Hampiasa azy indray aho ary hanome soso-kevitra tsara azy. ” … Nosoratan'i l
Tiako izy! Tena mahafinaritra izy, tena marina sy amin'ny an-tsipiriany! ” … Nosoratan'i pretyy
LightCate dia mazava, marina ary mifanaraka amin'ny toe-javatra. Hiantso azy indray aho! ” … Nosoratan'i Patrice47
Izy E! 🙂 Misaotra. ” … Nosoratan'i Holly212
Matoky ny famakiany aho. ” … Nosoratan'i newness
Cate, misaotra. Ho an'ny torohevitrao rehetra sy ny sitra-ponao. Rehefa manoratra ity aho dia afaka mahatsapa ny fihenjanana rehetra tavela amin'ny vatako. Hotahian'andriamanitra anie ianao! Hotazominao hatrany! ” … Nosoratan'i newness
Tsara izy! ” … Nosoratan'i nalita18
Excellent! " … Nosoratan'i Carolyn101
Tsara izy. ” … Nosoratan'i nalita18
Misaotra anao namaky. ” … Nosoratan'i tan
Mpamaky mahafinaritra. ” … Nosoratan'i Holly212
Tena ankasitrahana tokoa Cate ny fitarihanao sy ny toro-hevitra omena anao dia manampy sy marina foana. … Nosoratan'i ik royal
Mpamaky tsara toy ny mahazatra !! Tia azy!" … Nosoratan'i starchild700
Famakiana tena tsara iray hafa, tena tsara noho nyx. " … Nosoratan'i zimerili1
FAMAKIANA VOLA IZAO. KATEZA VE IZAO. JEREO mazava tsara ny toerana. Manome Torohevitra Lehibe ihany koa. Miandry ny hahita ny valiny …… VAKIO LEHIBE INDRINDRA. ” … Nosoratan'i newness
Mamaky tsara! Tena manazava. Faly be aho amin'ny famakiana izay manome tari-dalana mazava hanampy ahy handray safidy. Misaotra anao indrindra." … Nosoratan'i aishwaraya63
Tena manazava ”… nosoratan'i cowgirl_angel27
Mamiratra :) ”… nosoratan'i Holly212
Tsy vitan'ny hoe nanampy ahy tamin'ny zava-nitranga sy nifandray tamin'ny reniko izy fa nilaza tamiko koa ny fomba hanampiana azy handroso! Tena manampy, ary tso-po ary koa amin'ny teboka. Misaotra betsaka tamin'ny fanampianao! ” … Nosoratan'i Lucretia
Tena tsara be izy! Tiako ny famakiana! Mbola ho tsara kokoa aza raha tanteraka ny faminaniany… ho hitantsika… :)) ”… nosoratan'i elle
Namaky famakiana tsara be dia be izahay. Fa io no tena tsara indrindra! Tena manan-talenta sy manan-talenta ianao, ary mieritreritra aho fa afaka mandray soa avy amin'ny famakiana miaraka aminao ny tsirairay. Marina ianao ary tena manampy. Fiadanana sy fitahiana ho anao hatrany. ” … Nosoratan'i newness
Vehivavy matanjaka be izy. Tena marina izy tamin'ny olana ara-pahasalamana ary nanampy ahy tamin'ny fanesorana ny sakana mba hitoe-jaza ho an'ny vadiko sy izaho. Vehivavy tena fy manana fo lehibe! Misaotra, Cate. ” … Nosoratan'i Viviana Duncan
Tena mahatakatra sy milamina. Nanampy tamin'ny famahana tsara ny olako. ” … Nosoratan'i Peter
Misaotra anao Cate fa manan-talenta tokoa ianao tiako ny famakiana !! ” … Nosoratan'i ikroyal
Tena manana fahitana tena tsara izy. Tena tiako be izy. Mandeha any aminy foana aho rehefa manana fanontaniana maika. Matoky ny fitsarany aho ary tena manome sosokevitra! ” … Nosoratan'i srunion
Tena nahafinaritra izy! ” … Nosoratan'i Leeza
Tsara be izy! ” … Nosoratan'i Leeza
Misaotra tamin'ny famakiana. ” … Nosoratan'i
Tsara izy, marina, hitany ny toe-javatra nisy ahy rehefa avy nitantara tamiko izay hitany izy, nomeny torohevitra tena tsara aho. Izay nanampy ahy. Marina ny zavatra nolazainy tamiko, zavatra efa nesoriko hatry ny ela izy io, ary fantatro fa tsy maintsy hataoko. Misaotra anao Cate, tsara be ianao! ” … Nosoratan'i Lady
TENA TSARA :)!" … Nosoratan'i Renae
Tiako izy .. tsy manam-paharoa izy amin'ny teniny .. Nanontany azy momba ny zavatra sasany aho roa volana lasa izay ary marina ny lazany .. Hiresaka aminy aho amin'ny manaraka fa tsy afaka miandry izay hitranga Misaotra CATE !! Ianao no MAHAY INDRINDRA. ” … Nosoratan'i srunion
Manantena ny hahita izay hitranga 🙂 Misaotra ”… nosoratan'i clo
Misaotra anao indrindra. Tena nilaiko izany. ”… Nosoratan'i Denise
Cate, mahatalanjona ianao. Tena namoha maso tokoa ity vakiteny ity saingy toy izany hatrany ny famakiana miaraka aminao. Ary marina. Misaotra ”… nosoratan'i Gzelle1
Misaotra betsaka Cate. Handray ny torohevitrao aho anio hariva. ” … Nosoratan'i Denise
Mpamaky tsara! ” … Nosoratan'i need2 know5
Tiavo tia azy .. Hiresaka aminy foana aho. Tiako foana ny mamaky miaraka amin'ny fahazoan-dalany avo indrindra !! ” … Nosoratan'i srunion
Misaotra betsaka Cate fa mpamaky mahafinaritra tokoa ianao ary manome torohevitra tena tsara ”… nosoratan'i ikroyalalr
Mahitsy hatrany. Ary tena manampy. Misaotra anao!" … Nosoratan'i Gzelle1
Mpamaky boky mahay i Cate ary manototra tany betsaka amin'ny famakiny izy. Tena mafana fo sy mangoraka izy, tsy handany ny fotoananao na ny volanao. Vakiteny tsara. ” … Nosoratan'i Gzelle1
Tsara! ary marina !! ” … Nosoratan'i Vic
Misaotra anao amin'ny famakiana mahafinaritra sy hafatra manaitaitra !! ” … Nosoratan'i ikroyalakr
Misaotra anao noho ny fanampianao, lany fotoana ihany anefa aho. ” … Nosoratan'i sab1658
Cate dia fanampiana sy fisaorana lehibe. ” … Nosoratan'i novmoon
Famakiana tsara. ” … Nosoratan'i Carmen0522
Tsara be izy. Tiako ny famakiana. Misaotra anao!" … Nosoratan'i newnameok
Olona tena tsara sy mahatalanjona tanteraka ”… nosoratan'i Sandra Cole
Wunderbar… ”… nosoratan'i peter
Mahagaga fa teo amin'ny bokotra izy…… nosoratan'i mereheeni
Eny marina ilay vehivavy !! Tiako fa marina izy ”… nosoratan'i danistela
Haingam-pandeha izy ary marina be. Nilaza izy fa tena mazava ary nanampy ahy tamin'ny fotoana nampanaintaina ahy ”… nosoratan'i molly
Nanampy be dia be aho! ” … Nosoratan'i tim
Misaotra namana tsara fanahy noho ny fanampianao sy ny fanampianao amin'ny olako! ” … Nosoratan'i ikroyalakrkr
Mahafinaritra! " … Nosoratan'i christine susianto
Tena manampy sy manam-pahalalana. Manoro hevitra ny rehetra aho. Misaotra ”… nosoratan'i Layla
Mahafinaritra !!!!! " … Nosoratan'i Gzelle1
Famakiana tsara. Fantaro ny zavatra nefa tsy nolazaiko azy. Tsy maintsy manandrana azy ianao, dia ho gaga ianao. Manantena aho fa ho tanteraka izay lazainy amiko. ” … Nosoratan'i Cindy
Marina foana! LightCate dia mety amin'ny vola foana amin'ny fampahalalana sy torohevitra nomeny. ”… Nosoratan'i 1Motivatedmom
Olona tsara, ary mazava tsara ny taratasiny dia mampiharihary izay rehetra momba ny fiainako atolotray ”… nosoratan'i Sil
Misaotra anao!!!" … Nosoratan'i ladyseeking
Tena tsara izy! ” … Nosoratan'i Cheresse
Misaotra anao indrindra!!!" … Nosoratan'i Ladyseeking
Tena marina izy. ” … Nosoratan'i Staci
Mamaky teny mahafinaritra, manazava zavatra. ” … Nosoratan'i David
Misaotra anao nanome torohevitra !!! ” … Nosoratan'i ladyseeking
Misaotra betsaka anao nanampy anao !!! ” … Nosoratan'i Ladyseeking
Nametraka fanontaniana aho, fa lasa ny saina. ??? tsy azonao antoka hoe ahoana no fiasan'izany? :( ”… nosoratan'i Vanessa Sibley
fahitana lehibe !!! fanahy tena tsara fanahy ”… nosoratan'i sunshine
ny tsara indrindra!!! tiavo izy ”… nosoratan'i sunshine
Tena marina foana. Ankafizo tokoa ny fanomezanao. Misaotra ”… nosoratan'i Gzelle1
Misaotra tamin'ny famakinao dia tiako ity :-) ”… nosoratan'i yaneira
Haingam-pandeha sy mivantana fa tiako izany. ” … Nosoratan'i jenni
Efa elaela izay ny pvt farany nataoko niaraka tamin'i Cate ary androany dia nilaza tamiko bebe kokoa izy ary nanampy ahy nivoaka…. Misaotra Cate !!!! ” … Nosoratan'i simon
Tiavo ny marina anao Cate! Raha mila famakiana marina sy marina ary marina ianao, aza mitady lavitra intsony, LightCate no vadinao. Tiavo ary hazavao ny namako! ” … Nosoratan'i Gzelle1
izy no tsara indrindra !! fanahy sy fanahy tsara fanahy…… nosoratan'ny tanamasoandro
tiako izy!! ny tsara indrindra ”… nosoratan'i wildchild
tiako io, mijanona »… nosoratan'i ree
tia azy!! ny kintana rehetra eo amin'izao rehetra izao ”… nosoratan'i bunny
mahafinaritra be izy !! fanahy lehibe ”… nosoratan'i sunny
Torohevitra avo dia avo! ” … Nosoratan'i disturbed86
Tena tsara toy ny mahazatra. Tena talanjona aho. ” … Nosoratan'i Jordan
ny tsara indrindra ”… nosoratan'ny fitiavana be
Famakiana am-pahamarinana tena tsara mendrika izany. ” … Nosoratan'i Stickytafé
mamaky tsara toy ny mahazatra !!! fitiavana sy fahazavana hatrany ”… nosoratan'i Sunshine
haingana dia haingana izy ary tiako ny heriny ”… nosoratan'i vell
LightCate dia mamy sy tsara fanahy tokoa. Mamaky teny mahafinaritra foana, tiavo ny heriny sy ny fanahiny. iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny tranonkala. misaotra Light Cate ”… nosoratan'i Blessings
Ramatoa tena tsara fanahy. Ary accruate be koa. Fantany tsara ny karany, ary miantoka miaraka amin'ny karatra hafa izy amin'ny famakiana. Misaotra anao LightCate. Tiako ianao." … Nosoratan'i PIGLETME
Tena tiako ity vehivavy ity! Tena marina i Cate, mamelombelona tanteraka izy. ” … Nosoratan'i Gzelle1
Tiako izy fa mahafatifaty sy mahitsy izy ary fantatro fa marina ny teniny ary hiverina hamaky bebe kokoa izy… ”nosoratan'i Vaneya
Nifandray haingana be tamin'ny toe-javatra nisy ahy! Antsipiriany lehibe sy fampahalalana nomeny ahy. Fantaro tsara izay mitranga! Mpamaky be fanampiana, tsara fanahy, mangoraka ary mahay be! Hiverina eo aho!! ”… Nosoratan'i Tanya
Torohevitra marevaka, tena hampiasa indray ”… nosoratan'i Rosalie Jones
Tiako izy. tena manampy sy marina! ny tiako eto :) ”… nosoratan'i Ziyada-21
Mahagaga i Cate! Marina sy mangoraka izy. Tena mifandray amin'ny fon'ny raharaha izy. Misaotra anao Cate! ” … Nosoratan'i patvanvalen
Misaotra anao!" … Nosoratan'i Gzelle1
Haingam-pandeha, famakiana mazava ny doka. Misaotra anao." … Nosoratan'i veezee
Betsaka ny pitsopitsony .. Haingam-pandeha. ” … Nosoratan'i Johnny
Tsara sy mafana ny Cate, saingy fohy sy nifarana ny famakiana, rehefa nanomboka nahaliana ny zavatra. ” … Nosoratan'i Sigal
Ny famakiana dia nampiala voly fa tena marina sy mivantana. Fantatro sahady izay noteneniny tamiko fa mahafinaritra ny afaka maheno azy amin'ny olon-kafa. Mamaky tsara !! " … Nosoratan'i dee
Haingana be i Cate raha te hifandray tamiko. Nanana famakiana mahafinaritra niaraka taminy aho, ary novaliany toy ny namako avokoa ny fanontaniako rehetra. Tena hiverina aho noho ny fitahiany. :) ”… nosoratan'i JellyBell
Haingam-pandeha! ” … Nosoratan'i Johnny
Tiako i Cate! Mpamaky tena mahay izy ary marina sy be fitiavana tokoa! Izy no tsara indrindra! ” … Nosoratan'i Brittany
tena haingana sy marina .. mahitsy manondro ”… nosoratan'i dex
tena tsara tena marina ”… nosoratan'i vicky hendry
Cate no tsara indrindra. Mahafinaritra izy. Izy dia tena mampionona, mahalala fomba, tsara fanahy ary miteny hatramin'ny farany. Ary azo antoka, afaka mijery zavatra tanteraka izy. Azony tsara sy hazavainy tsara ny pitsopitsony momba ilay toe-javatra .Mamirapiratra izy. Misaotra betsaka Cate. Ianao no mahay indrindra!" … Nosoratan'i Nariel
Haingam-pandeha ”… nosoratan'i Johnny
ny famakiana voalohany miaraka amin'i Cate… mahafinaritra izy! Toa marina! Tena nahafinaritra ahy ny namaky! ” … Nosoratan'i skier8001
Tena tsara izy. tia ny xxx ... ”nosoratan'i Ziyada-21
Misaotra anao noho ny torohevitrao sy ny fitarihanao hiverina. ” … Nosoratan'i mag
tena manampy ”… nosoratan'i carolina
Misaotra, mpamaky tsara be ianao! ” … Nosoratan'i Shelly
tena tsara ”… nosoratan'i leigh osborne
Misaotra ry namako malalako noho ny vavaka fanasitranana nataonao. Tsapako tokoa ny fahasamihafana amin'ny vatako. Tsy dia misy fihenjanana. Hotahin'Andriamanitra ianao sy ny torohevitra feno fahendrena anananao. Fitiavana sy fahazavana ”… nosoratan'i gzelle2
awesommmmmmmmmmmmmme ”… nosoratan'i tymora
Mpamaky mahavariana! Tena intuitive sy haingana ary marina. ”… Nosoratan'i JQ
Nihevitra aho fa tsara izy, nametraka fanontaniana tsara ary namaly izay tena ilaiko. Mahatsiaro ho tsara kokoa amin'ny toe-javatra misy ahy aho izao. 🙂 ”… nosoratan'i Skye
Vehivavy mahafinaritra! Tsy afaka manome sosokevitra ambony azy fotsiny aho! Tena manampy anao izy ary tena marin-toetra! ” … Nosoratan'i Aurora Borealis
Iray amin'ireo tsara indrindra! ” … Nosoratan'i gzelle2
Light dia psychic tsara tao Oranum efa ela. Manampy tsy tapaka izy isaky ny mahita azy mamaky manokana ary manome ahy zavatra esorina foana izay hanampy ahy handroso. ”… Nosoratan'i Ben
Lightcate dia nanao izany indray. Tena mahatalanjona, nanana famakiana vaovao miaraka aminy aho ary nahagaga azy izany. Izy dia teo amin'ny teboka tamin'ny famakiana manontolo. Ny fahamendrehany dia tsiranoka fotsiny. Izy no tena tsy misy resaka momba izany. Tsy andriko izay hahitana ny fomba hanombohany maminavina ny faminaniany. Hamarino raha misy fanavaozam-baovao ho avy. Fitahiana maro…. ” … Nosoratan'i Lucy117
Famakiana mahafinaritra toy izany, marina sy marina tokoa. ”… Nosoratan'i Lorann
Mamaky tsara. Tsara sy nahafinaritra be izy. ” … Nosoratan'i SOLANGE
Wow Ity no famakiako voalohany niaraka tamin'i Lightcafe ary notsofiny rano ara-bakiteny ny saiko. Wow dia mahatalanjona tanteraka izy. Tena handeha any aminy aho raha mila fanavaozam-baovao amin'ny ho avy. Tsy andriko izay hijerena ny faminaniany. ” … Nosoratan'i Lucy117
Ny famakiana tena tsara dia tsy afaka miandry ny fahatanterahan'izany ”… nosoratan'i Godsson4
tena marina sy intuitive. Mahatalanjona ”… nosoratan'i spankyd
Misaotra anao namaky. :) ”… nosoratan'i c
tena marani-tsaina izy, sariaka ary sambatra. tsara ny torohevitra nomeny ary izay hitany dia marina fa tsy avy amin'ny eritreriny fotsiny. ” … Nosoratan'i Mia
Fanokafana ny maso, azo antoka ”… nosoratan'i Gzelle2
tsy ratsy izany, iriko mba homena fotoana bebe kokoa aho, mba hahafahako mieritreritra mahitsy ”… nosoratan'i j maharitra mandrakizay. hiadzi
Cate, misaotra betsaka. Mahagaga ny fahitana anao, naka zavatra tsy nolazaiko akory aho, tiako ny mazava ary tena ilaina izany amin'izao fotoana izao. Ny tsara indrindra ho anao izao sy izao hatrany. Enga anie ka hanome anao kintana 1000 aho! ” … Nosoratan'i Gzelle2
Tiako i Cate fa marina sy mahitsy fo amiko foana izy. ” … Nosoratan'i Brittany
Cate dia feno, feno fahitana ary tena marin-toetra na tsara na ratsy. ” … Nosoratan'i Scentsations
Misaotra !!! " … Nosoratan'i Gzelle2
famakiana marina tsara ”… nosoratan'i katie
Misaotra anao. Hanavao anao aho. Mahagaga foana ianao ”» nosoratan'i Beautyqueen
Tsara tarehy ary tena marina koa! ” … Nosoratan'i Jane
FABULOUS ARY JIOLAKA ”… nosoratan'i Cam
marina foana ”… nosoratan'i abby
misaotra an'i Cate amin'ny fanavaozana mahafinaritra !!! … Nosoratan'i rosy
faly tokoa aho nanana fanavaozana niaraka tamin'i Cate..ila izany ”… nosoratan'i rosy
Ramatoa mahatalanjona i Cate. Tena marina izy ary nanampy ahy be dia be. Top Notch Advisor ”… nosoratan'i Jay
Mahay mamaky tena amin'ny an-tsipiriany sy mahitsy. ” … Nosoratan'ny Alahady
Famakiana tena tsara - vehivavy tsara fanahy amin'ny fahitana tsara. Manoro hevitra an'iza ho an'iza. ”… Nosoratan'i Kelly
typer tena haingana… tsy mandany fotoana. mijanona amin'ny fanontaniana napetraka. Misaotra anao." … Nosoratan'i melanie
Cate, no psychic tsara indrindra amin'ny Oranum. Tena marin-toetra izy, mamy ary be fiahiana. Tena marina izy amin'ny famakiny sy ny marimaritra iraisana. Tsy psychic fotsiny izy fa namana koa. ”… Nosoratan'i Brittany
mila manandrana mamaky miaraka amin'i Cate ianao! Tsy mampino izy ary manantena aho fa nanatona azy tany aloha !!! ” … Nosoratan'i rosy
Haingam-pandeha izy amin'ny valiny. Fantany izay tsapanao. Hiresaka aminy indray aho amin'ny volana ho avy satria nomeny hevitra sy fanantenana aho! ” … Nosoratan'i Manny
Mpamaky mahavariana. Manan-talenta tokoa. ” … Nosoratan'i abby
Diso fanantenana izy fa tsy nilaza tamiko firy ”… nosoratan'i maritza02
Misaotra betsaka anao Lightcate, na dia nanana prob teknika vitsivitsy aza izahay, dia tsy nilavo lefona ary nanana ilay pvt. Izy dia olona mahatalanjona fotsiny ary haingana be amin'ny fanoratana izy ary afaka nanome fampahalalana marobe tamiko tao anatin'ny fotoana fohy. Manana fanomezana mahatalanjona izy haminany mialoha ny ankehitriny sy ny ho avy. Hieritreritra ny torohevitra nomeny ahy aho. Tsy andriko izay hahitana ny fomba fahatanterahan'ny faminaniany. Fitahiana maro…. ” … Nosoratan'i Lucy117
Haingana .. Marina .. Mahagaga ”… nosoratan'i Jay
tiako ity vehivavy ity mahatsapa fifandraisana eo aminy eo no eo aho ary tena manintona ahy ny famihinana lehibe sy ny fitiavana anao sy ny fianakavianao xoxo ”… nosoratan'i jenna
mamaky tsara! THX!" … Nosoratan'i stephanie
Famakiana mahafinaritra. ” … Nosoratan'i katie
Faly be amin'ny famakiana 100% afa-po xxxxR ”… nosoratan'i Rutinha133
Mamaky tsara! ” … Nosoratan'i vess
mpamaky tsara hatrany ”… nosoratan'i abby
Tena intuitive sy mangoraka. Famakiana mahafinaritra. Betsaka ny azo zahana. ” … Nosoratan'i Ruth-Linnea
Mahatalanjona!!! Nanana famakiana roa aho androany niaraka tamin'i Cate ary nanampy ahy izy handrehitra fahazavana sy hahita vahaolana amin'ireo olako rehetra manomboka amin'ny asa ka hatramin'ny fitiavana, fifindra-monina, fandriam-pahalemana anaty ary ny zavatra rehetra. Misaotra betsaka anao Cate, ary nandefa ahy diksha sy fiadanam-po. Love and best, Lana :) ”… nosoratan'i Lana
Tiako i Cate. Tena tena izy sy be fiahiana. Mahatsapa ho tsara amin'ny famakiana. ” … Nosoratan'i Ben
tena mahavariana tokoa inona no azoko lazaina toy izany intuitive sy nahita zavatra izay mety tsy ho fantany. Tena feno fankasitrahana azy aho. famakiana nahagaga ”… nosoratan'i katie
Cate dia marina ary nilaiko izany… ”… nosoratan'i Rosalyn
Sambany namaky niaraka tamin'ny LightCate izy, mpamaky malefaka amin'ny fomba fomba fiasa nefa matanjaka be. Nifandray tamiko tsara izy, nanome ahy fanazavana marina momba ahy. Tiako ny fomba famakiany ary manantena ny hiverina aminy indray atsy ho atsy. :) ”… nosoratan'i Royal Leo
Haingana sy marina !! ” … Nosoratan'i Diane
izy no iray amin'ireo tsara indrindra ”… nosoratan'i julie
tena manazava, ary tena manampy sy mahatakatra tokoa…… nosoratan'i Mihiret
Ny fandaniam-bola tena tsy ananako, fa io no vola lany. Ny fahalalana dia hery. Misaotra LightCate. " … Nosoratan'i whiteflowers 1
Misaotra betsaka Cate, Blessing ho anao ”… nosoratan'i Bless15
marina tokoa i cate ary fanampiana lehibe. ” … Nosoratan'i novmoon
Tsara tarehy sy nampitony izy ary farany nanome ahy fiadanan-tsaina. Efa ela be aho no niatrika ny famoizana olon-tiana iray ary nanome ahy fomba fijery hafa izy. Andriamanitra hitahy ny LightCate ”… nosoratan'i Em
Niresaka tamiko efa ela izy ary namaky tanteraka. Tsy salama aho ary teo ho ahy izy. Ankehitriny dia mila manana ny tanjaka nolazainy aho fa mila manao izay mahasoa ahy. ”… Nosoratan'i Eli
mamaky teny gr8, marina ary tena tsara. ” … Nosoratan'i Andy
Izy dia mahafinaritra toy ny mahazatra, mampifandray marina. Hiverina aho xx ”… nosoratan'i Z
Mpamaky mahay i Cate, nanampy ahy hamantatra ny olako izy. Misaotra. " … Nosoratan'i Bless15
pie sweetie, marina foana. Misaotra anao cate. Hiverina indray aho ”… nosoratan'i beautyqueen1001
Mwah !! Tiako fotsiny ianao LightCate, mahatsiaro ho tsara kokoa foana aho rehefa avy niresaka taminao. Fitiavana sy hazavana malala. ” … Nosoratan'i whiteflowers 1
Ny famakiana am-pitiavana, marina sy mahafinaritra, lany ny crédit fa def. miverina misaotra ”… nosoratan'i Sherry
Hiandry hijery aho, hahatsapa ho tsara! ” … Nosoratan'i Godsson4
tsara izy .. ary hita eo ”… nosoratan'i peacegal
Tena marina sy nanampy be i Cate, nanome torohevitra tsara izy. ” … Nosoratan'i starlady11
Tena marina, ary marina, misaotra ”… nosoratan'i Alexandra
Misaotra anao noho ny maha marina anao. ” … Nosoratan'i mel
Manome tanana mamaky haingana sy haingana, mora, antsipiriany tsara, manampy sy mampahery tokoa, tsy afaka miandry ny fahatanterahan'ny faminaniana misaotra betsaka !! ”… Nosoratan'i Sherry
Cate dia mpamaky mahafinaritra sy mahitsy tokoa ianao. Tsy andriko izay hijerena izany rehetra izany. Fitiavana sy hazavana malala. ” … Nosoratan'i whiteflowers 1
Cate dia mahafinaritra, mpangalatra haingana, antsipiriany mahaliana toy izany ary misy dikany ny zava-drehetra. Tena tiako ny famakiana, misaotra betsaka ”… nosoratan'i Sherry
Mamaky tsara !!! Mwah !!!!! " … Nosoratan'i whiteflowers 1
tiavo ity ”… nosoratan'i computerluv
Tena nanampy i Cate, nahafantatra sy nanampy izy…… nosoratan'i starlady11
Tsara ”… nosoratan'i Laura Mason
Tsara…. Tia ny fombany sy ny heriny mahafinaritra..Kosonom ”… nosoratan'i Gaby11
MISAOTRA anao cate. Tsara ianao raha mifantina fihetseham-po. Hanavao anao aho ”… nosoratan'i beautyqueen1001
AWSOME ”… nosoratan'i Tyrone
Mpamaky miavaka! Haingana ”… nosoratan'i Jay
Nifandray i Cate ary nahita ny zava-drehetra, nanampy ahy izy. Misaotra anao." … Nosoratan'i stargaze82
Mahafinaritra izy ary manana accent mahafinaritra. Miasa tsara izy ary mampitony anao. ” … Nosoratan'i Marvin
Raha tsy nanana afa-tsy crédit vitsivitsy sisa, saingy tena mamporisika an'ity psychic ity aho, ho be fiheverana ary hiezaka hanampy araka izay tratra ”… nosoratan'i Maina
Misaotra anao Cate. ” … Nosoratan'i Sapphire456
Desambra 26, 2017 amin'ny 6: 55 pm
Misaotra nanamaivana ny tahotro. Indraindray ny zavatra sarotra indrindra atao dia ny miandry. Matoky aho fa hilamina ny zava-drehetra. Misaotra indray, fitiavana sy hazavana. ” … Nosoratan'i whiteflowers 1
Tena mahafinaritra izy! Olona tena manan-talenta nanome ahy ny famakiana tsara indrindra, miaraka amin'ny antsipiriany maro. Nahatsapa ho tsara kokoa aho rehefa avy niresaka taminy, toy ny miresaka amin'ny namako. Marina izy tamin'ny valiny nomen'ny karatra fa, nijanona ho tsara. ” … Nosoratan'i SNG
Mahagaga fotsiny i Cate. Tena soso-kevitra! ”… Nosoratan'i Aurora Borealis
Famakiana mamy tokoa, ary mino aho fa ho tonga izay soratany. ” … Nosoratan'i BN
cate misaotra anao nanampy… ”… nosoratan'i stargaze82
Famakiana tsara amin'ny an-tsipiriany. ” … Nosoratan'i V
tsara izy ”… nosoratan'i ohood
mahafinaritra ny mamaky !!! ” … Nosoratan'i saoka
Mahafinaritra ny miresaka aminy ary mahatalanjona ny fahitany azy. Fantany sy azony tsara ny olona andamp; toe-javatra eo amin'ny fiainako. Mahatsiaro ho tsara kokoa aho rehefa avy niresaka taminy. Nolazainy tamiko ny zavatra tena nanindry ary nahatonga ahy hahatsapa zavatra goavambe izay tsy noeritreretiko. Tena feno fankasitrahana aho. :) ”… nosoratan'i Kelly
cate, misaotra betsaka tamin'ny famakiana sy fanampiana, mankasitraka anao aho. ” … Nosoratan'i dazzle111